Raha niaritra ahy ianao nandritra ny folo taona lasa, matoky aho fa nanatri-maso ny fahazotoako hiditra amin'ny media sosialy ianao. Raha mbola eo ianao, dia misaotra anao aho fa mbola eto ianao - satria niditra an-tsokosoko tao amin'ny media sosialy aho tamin'ny voalohany fa faly tamin'ny fahafaha-manangana fifandraisana tsara kokoa sy mahatakatra tsara ny hafa. Pisinina marivo, raha tsy hiteny afa-tsy izay.
Alao an-tsaina ange ny fandrenesana ny kiakiaka avy any amin'ny efitrano hafa izay ananan'ny mpiara-miasa miady hevitra amin'ny lohahevitra manokana. Miditra ao amin'ny efitrano ianao, tsy mahatakatra ny sahan-kevitra, tsy mahalala ny fiavian'ny olona tsirairay, ary mikiakiaka ny hevitrao maneso ianao. Na dia mety mankasitraka azy aza ny olona vitsivitsy, ny ankamaroan'ny mpandinika dia hieritreritra fotsiny fa olon-dratsy ianao.
Raha nanoratra fanavaozam-baovao aho (nasiako marika #goodpeople) izay nizara tantara iray momba ny olona nanao sorona sy nanampy olombelona hafa… hahazo fomba am-polony maro aho. Raha natsipiko tao anaty barbara ny fanavaozana ara-politika an'ny profil iray hafa dia nahazo zato aho. Ny ankabeazan'ny mpijery Facebook-ko dia tsy nahita afa-tsy ny lafiny iray tamiko, ary nahatsiravina izany.
Ny tsy manana ny haino aman-jery sosialy dia ny sahan-kevitra rehetra. Tsy azoko lazaina aminao foana ny fotoana nanolorako hevitra ary notondroina avy hatrany ny mifanohitra amin'izay tena ninoako. Ny fanavaozana ny haino aman-jery sosialy tsirairay izay mampiroborobo ny algorithma ny fanosehana sy ny fisarihana ireo foko misy ny mpijery roa izay manafika. Mampalahelo fa manampy azy fotsiny ny tsy mitonona anarana.
Ny konteks dia manakiana amin'ny rafi-pinoana rehetra. Misy antony mahatonga ny ankizy matetika hitombo amin'ny zavatra itovizany amin'ny ray aman-dreniny. Io dia tsy indoctrination, tena ara-bakiteny fa isan'andro izy ireo dia nahita fanabeazana ary nampiharihary ny zavatra inoan'ny olona iray tiany sy hajain'izy ireo. Io finoana io dia tohanana tanteraka amin'ny alàlan'ny fifandraisana an'arivony na ana hetsiny. Atambaro fa mihidy ny finoana sy ny traikefa ananana ary ireo finoana ireo. Zavatra sarotra izany - raha tsy azo atao - ny mihodina.
Tsy miresaka fankahalana no resahiko eto… na dia mety ho mianatra mampalahelo aza izany. Zavatra tsotra no tiako resahina… toy ny finoana hery lehibe kokoa, fanabeazana, andraikitry ny governemanta, harena, orinasa, sns. Ny zava-misy dia samy manana ny finoany voasoritra ao amintsika daholo isika, ny traikefa manamafy ireo finoana ireo, ary ny fomba fijerintsika tsy mitovy izao tontolo izao noho izy ireo. Zavatra tokony hajaina izany nefa matetika tsy ao amin'ny media sosialy.
Ohatra iray matetika ampiasako ny asa aman-draharaha satria mpiasa aho hatramin'ny 40 taona teo ho eo. Mandra-pahatongan'ny nanombohako ny orinasako sy ny olona niasako, dia tena tsy fantatro avokoa ny fanamby rehetra amin'ny fanombohana sy fampandehanana orinasa. Tsy azoko ny lalàna mifehy, ny fanampiana voafetra, ny kaonty, ny olana amin'ny cashflow ary ny fangatahana hafa. Zavatra tsotra… toy ny hoe matetika ny orinasa (tara) tara amin'ny fandoavana ny faktiora.
Nanala ny Facebook tamina namana 1,000 XNUMX mahery aho ary hanohy hampihena izany habetsaky ny fandrosoana izany. Amin'ny ankabeazany, itondrako ny zava-drehetra ankehitriny toy ny hoe handeha ampahibemaso - na manamarika izany aho na tsia. Nihena be ny fifamofoako tao amin'ny Facebook. Te hahafantatra ihany koa aho fa mahita ny ratsy indrindra amin'ny olon-kafa koa. Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana.
Najanoko ihany ny fampiasana Facebook ho an'ny orinasa. Ny algorithman Facebook dia namboarina ho anao vola mba hiseho ny fanavaozana ny pejinao ary heveriko fa tena ratsy izy io. Nandany taona maro ny orinasa nanangana fanarahana ary avy eo nandrovitra ny Facebook ny rehetra saingy nandoa lahatsoratra avy amin'ny mpanaraka azy… very tanteraka ny fampiasam-bola nataon'izy ireo tamin'ny fitantanana fiaraha-monina. Tsy maninona aho raha afaka mahazo orinasa bebe kokoa amin'ny Facebook, tsy hanandrana aho. Ho fanampin'izay, tsy te-hanao vivery ny aiko amin'ny fiainako manokana any aho - izay mora loatra.
Mbola misokatra malalaka amin'ny fifandraisana amin'ny olona rehetra aho LinkedIn satria ny orinasako sy ny lahatsoratro mifandraika amin'ny orinasako ary ny podcast-ko no zaraiko any. Nahita olona hafa nizara fanavaozana manokana tao aho ary hanome torohevitra hanohitra izany. Tsy hiditra amin'ny efitrano fivoriana ianao ary manomboka mihiaka amin'ny olona… aza atao ao amin'ny LinkedIn izany. Efitra fandraisam-bahininao an-tserasera io ary mila mitazona an'io haavon'ny matihanina io ianao.
Na dia amin'ny Instagram aza dia mila mitandrina ihany aho. Ny fanangonako bourbon be dia be dia nisy olona nifandray tamiko noho ny fanahiana fa mpisotro toaka aho. Raha nantsoina hoe “Ny fanangonako ny boriboriko” ny Instagram, dia tsara ny andiana boribory nangoniko. Na izany aza, ny pejiko dia… ary ny famaritako dia fiainana mihoatra ny 50. Vokatr'izany dia be loatra ny sary bourbon, ary mihevitra ny olona ho mamo aho. Oy.
Ny tiako indrindra momba ny Twitter dia toa mampiseho fahitana mandanjalanja momba ahy ny algorithma fa tsy ireo siokako mampiady hevitra indrindra. Ary… ny adihevitra ao amin'ny Twitter dia mety hahatonga ilay lisitra nalaza fa tsy tokony hiasa hatrany. Manana ny resaka mahaliana indrindra tao amin'ny Twitter aho… na dia misy adihevitra mafana aza ry zareo. Ary, matetika aho afaka mametaka resaka izay mampihetsi-po amin'ny teny tsara fanahy. Toa tsy nisy izany tao amin'ny Facebook.
Twitter dia ho lasa fantsona sarotra hialako ny hevitro… saingy tsapako fa mbola mety handratra ny lazako ihany izany. Ny valinteny iray nalaina tsy ho an'ny tontolon'ny resako manontolo momba ny mombamomba ahy dia mety hanimba. Mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fanapahan-kevitra momba izay zaraiko ao amin'ny Twitter noho ny taloha aho. Imbetsaka aho dia tsy tsindrio akory ny famoahana ilay bitsika ary mandroso.